Shan xaqiiqo oo ku saabsan Qurba-joogta Soomaalida ee daafaha dunida - — Maanfur
Home Aragti-doon Shan xaqiiqo oo ku saabsan Qurba-joogta Soomaalida ee daafaha dunida –
Shan xaqiiqo oo ku saabsan Qurba-joogta Soomaalida ee daafaha dunida –
Soomaaliya waxaa ka taagnaa kala dambeyn la’aan iyo colaado muddadii lagu guda jiray dagaallada sokeeye.
Sidoo kale bulshada ku nool dalka waxay la kulmayeen deganaan la’aan dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha ah, waxayna arrintaa sababtay in dad badan ay u qaxaan dibadda dalka.
Waxay qaarkood ku kala nool yihiin dalalka Yurub iyo Mareykanka, waxayna in badan oo ka mid ah mareen jidad halis ah sida badda si ay u gaaraan wadamadaas.
Haddaba halkan waxaan idiinkugu soo gudbineynaa shan arrimood oo ku saabsan qurbajoogta Soomaalida.
1 – Muddadii u dhexeysay 1990 iyo 2015 – Tiradii carruurta eek u dhalatay dalka Soomaaliya balse ku barbaartay dibadda wadanka ayaa aad u sii badatay. Waxay markii hore ahayd 850,000 balse muddadaas waxay gaartay illaa 2 milyan.Sidoo kale tirada qurbajoogta Soomaalida waxay sare u kacday illaa 136% boqolkiiba, isla muddadaas, sida ay sheegtay Qaramada Midoobeey.
2 – Tirada Soomaalida u qexeysa dibadaha way sii kordheysaa – Sannadkii 1990-kii, sida ay qiyaastay Hay’adda Qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobeey, illaa 470,000 oo Soomaali ah ayaa ahayd qurbajoog. Badankoodana waxay ahaayeen ardey ama dad si ku meel gaar ah ugu nool dalalka kale ee caalamka. Balse markii la soo gaaray 2014-kii, 1.1 milyan oo Soomaali ah ayaa ku noolayd qurbaha.
3 – Seddax-meelood laba meel oo ka mid ah qurbajoogta waxay deggan yihiin dalalka deriska – Kenya xeryo ku yaalla ayey qaxootiga ugu badan marti ku yihiin muddo 30 sano ah. Dadaad waxaa ku taalla xerada qaxooti ee dunida ugu wayn oo ay ku jiraan qaxootiga ugu badan, sida ay qaramada Midoobeey sheegtay. Sidoo kale qaxooti badan oo Soomaali ah ayaa ku kala sugan dalalka Itoobiya, Jabuuti, Uganda iyo Yaman.
4 – Qiyaastii 280,000 oo qurbajoog Soomaali ah ayaa deggan dalalka Midowga Yurub, Norway iyo Switzerland – Maadaama ay yihiin meelaha sida ugu ballaaran looga soo dhoweeyo soo galootiga, EU, Norway iyo Switzerland waxay hoy u yihiin boqolkiiba 14% ka mid ah qurbajoogta Soomaalida. Tan iyo sannadkii 2008, dalalkaas waxaa gaaray 140,000 oo Soomaali megengelyo doon ah, Sida ay sheegtay hay’ada tirakoobka Midowga Yurub.
5 – Bulshada Soomaalda Mareykanka ayaa sii badaneysa – Sida lagu sheegay tirakoob laga sameeyay Mareykanka, sannadkii 1990-kii, Soomaalida halkaas ku noolayad waxay gaarayeen illaa 2,500. Balse Markii la soo gaaray 2015-kii waxay noqdeen 140,000 illaa 150,000. Mareykanka waxaa deggan boqolkiiba 7% ka mid ah qurbajoogta Soomaalida ee dunida.
Previous article7 hadiyad oo madaxda ay siin karaan dadkooda
Next articleShan arrimood oo kuu fududeynaya in khudbad wanaagsan aad jeediso